अब चन्द्रमामा मोबाइल नेटवर्क, चल्ने भयो फोर जी – Nepal24News
विश्वका कैयन् भागमा अहिले पनि मोबाइल फोनको नेटवर्क उपलब्ध छैन । तर वैज्ञानिकहरु चाहिँ चन्द्रमामा मोबाइलको नेटवर्क पुर्याउन जुटेका छन् ।आगामी वर्ष इतिहासमै पहिलोपटक चन्द्रमामा मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध हुने भएको हो । यदि त्यसो भएमा चन्द्रमाबाट पृथ्वीमा हाइ डेफिनिसन भिडियो स्ट्रिमिंग सम्भव हुनेछ ।
Prevश्रीमतीको आइटम डान्स हेर्ने बितिकै धमलाले अंतर्बातामै दिए एलिजालाई यस्तो चेतावनी !
Nextकरिश्मा मानन्धरले छोरीलाई घरबाट बाहिर निकाल्ने कुरा किन गरिन् ? रहस्य बाहिरियो !